ပြသနာပေါင်းစုံ ဖန်တီးကာ အမျိုးသားရေး အဆိပ်ခပ်ခံနေရတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Total number of monks, novices and nuns သင်္ကန်းဝတ်ဖြင့် လိမ်လည်အလှူခံနေသူများကို အရေးယူ
My proposals for “Air Asia”. AirAsia ၏ ၁၃ နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည် အထူးအစီအစဉ် »
ပြသနာပေါင်းစုံ ဖန်တီးကာ အမျိုးသားရေး အဆိပ်ခပ်ခံနေရတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်
ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ၊ ၂၀၁၄ .ဆွေမွန်ရေးသည်။
ဓါတ်ပုံကလေးတစ်ပုံကို online ပေါ်မှာ ရှာတွေ့မယ်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက် သေနေမယ်၊ လည်ပင်းကိုလည်း လှီးထားတယ်၊ လှီးခံထားရအောင် လည်း Photoshop ဓာတ်ပုံပြင် ပညာနဲ့ လုပ်လို့ရသေးတယ်။
ထားတော့..လှီးလိုက်ပြီ။ ဓါတ်ပုံရလာပြီ။ ဓါတ်ပုံကို ရတာနဲ့ ရေးချင်တဲ့ အညွှန်းကို ရေးတင်လို့ ရတယ်။ အဲဒီ ဓါတ်ပုံကို အရင်တွေ့မိသူရဲ့ စိတ်ဓာတ်ဟာ ဘယ်လောက်ကောင်းမွန်သလဲ.. ဒါမှမဟုတ် ..ယုတ်ညံ့သလဲ အပေါ်မှာ သတင်းကို ထင်သလို ရေးဖွလို့ ရတယ်။
ကဲ… ကုလားတွေ ဘယ်နေရာမှာ မုဒိမ်းကျင့် သတ်လိုက်ပြန်ပြီ။ ခွေးကုလားတွေ၊ မုဒိမ်းမျိုးတွေ၊ ယုတ်ညံ့တဲ့ကောင်တွေ၊ ဆဲဆိုရေးသားပြီး ဖရင်းအများကြီးကို တဂ်ပေးပြီး တင်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ပိုင် ရှိသမျှ အကောင့်အားလုံးမှာ တင်မယ်။ သတင်းစပြန့်လာမယ်။ လူများတဲ့ ဂရုတွေမှာ အမည်လွဲ အကောင့်နဲ့ ထပ်တင်မယ်။ ဆဲကြမယ်။ ဆိုကြမယ်။ အချိန်ကုန်မယ်။ ကုလားကို လူမုန်းများလာမယ်။ ရိုးနေတဲ့ အကွက်တွေပါပဲ။
ဒီအခြေအနေ မဖြစ်ဖြစ်အောင်၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင် ဆူပူမှုတွေ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေအများကြီး ရှိနေပါတယ်။
အဓိကအချက်က ကိုယ်တိုင် စာပေအသိပညာ အတတ်ပညာ လုံလောက်အောင် တတ်ရင် အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေတတ်ရင် အလိမ်ခံရစရာ မရှိပါဘူး။ အလိမ်မခံရအောင် လုပ်ရမယ့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းက စာကို လိုလိုချင်ချင်နဲ့ မတတ်တတ်အောင် သင်ယူဖို့ပါ။ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ကိုယ်တိုင်မမြှင့်ရင် ဘယ်သူမှ လာသင်ပေးမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင် အရည်အချင်းတွေပြင်ကြဖို့ အမြင်တွေ ပြောင်းလဲကြဖို့လိုမယ် လိုမယ်လို့ပဲ မြင်မိပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာ ကလေးမလေးတစ်ဦး လည်ပင်းလှီးခံထားရတဲ့ ပုံ၊ စကပ်လန်နေတဲ့ ပုံတွေ ပြန့်လာနေပြန်တယ်။ မလေးရှားမှာ မြန်မာမကို ကုလားက မုဒိမ်းကျင့်ပြီး သတ်လိုက်ပြန်ပြီ။ နောက်တစ်ဦးက ပုံညွှန်းတွေ အမျိုးမျိုးတပ်လို့… ရှက်စရာကောင်းလောက်အောင် စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျတဲ့ အုပ်စုတစ်ခုက တမင်ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်နေမှန်း သိကို သိရပေမယ့် မသိနားမလည်တဲ့ online user တွေက ယုံထင်ကြောင်ထင် ဖြစ်နေကြ ရပြန်တယ်။ တစ်နိုင်ငံတည်း နေကြသူအချင်းချင်း အမုန်းပွားကြ ဆဲကြ ဆိုကြ.. မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ အမုန်းသံသရာက မလွတ်နိုင်အောင် တမင်ဖန်တီးနေတာတွေကို တွေ့မြင်နေရပြန်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံတစ်ခု တက်လာရင် မှန် / မမှန်သိချင်ရင် ဘယ်ဓာတ်ပုံကို မဆို Google ဆိုဒ်ရဲ့ ဒီလင့်မှာ https://images.google.com/ တင်ဖွင့်ကြည့်ပြီး ဒီဓာတ်ပုံဟာ ဘယ်နေရာက ပုံလဲဆိုတာ ဓာတ်ပုံကပေးတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဟာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်ဟာ Media War ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဝီရသူလို ဘုန်းကြီးကအစ သစ်ထူးလွင်အဆုံး မန္တလေး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ညီအကို မုဒိမ်းမကျင့်ပါဘဲလျှက် မုဒိမ်းကျင့်ပါတယ်ဆိုပြီး လိမ်ညာသတင်းတင်လို့ မန္တလေးမြိ့ကြီး ပျက်လုလု ဖြစ်ခဲ့တာ မကြာသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် သတင်းတစ်ခုဟာ အမှန်လား၊ လိမ်ညာဖန်တီးထားတာလား သိနိုင်ဖို့ မှန်ကန်တဲ့သတင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီကလေးမပုံကို တင်ရှာလိုက်တဲ့အခါ သတင်းလင့်တွေ ထွက်လာပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့ လင့်တွေဟာ ပေါ်တူဂီဘာသာနဲ့ တင်ထားပေမယ့် အင်္ဂလိပ် ဘာသာကို google translator သုံးပြီး ဘာသာပြန် ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ ဒီကလေးမဟာ အမည် Barbara Lira ခေါ်ပြီး ၁၃နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းက Pará ပြည်နယ် Belem မြို့ကြီးကနေ ကီလိုမီတာ ၇၀၀ ကွာတဲ့ Parauapebas မြို့လေးမှာ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မုဒိန်းကျင့် လူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့အပြင် မလေးရှားမှာ သေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့တက်လာတဲ့ Thedailygore သတင်းမှာ ဖော်ပြတာကတော့ အသက် ၁၃ နှစ် အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ Barbara Pereira Lira ဟာ မုဒိန်းကျင့်ခံရပြီး လူမဆန်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် သောကြာ ည မှာ Barbara Pereira Lira ဟာဖုန်းထဲက လူတစ်ယောက်နဲ့ ချိန်းဆိုခဲ့တယ်။ အိမ်ကနေ Honda Biz အမျိုးအစား ဆိုင်ကယ်စီးပြီးထွက်သွားတာကို လုံခြုံရေး ကင်မရာမှာ နောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရတယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေက ပြောထားပါတယ်။
Barbara Pereira Lira ရဲ့ ရည်စား ဖြစ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်အရ ၊ သူဟာ ချစ်သူ Barbara Pereira Lira နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မှာ နောက်ဆုံးတွေ့ ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနောက် သူမနဲ့့မတွေ့ ဖြစ်ခဲ့ကြဘူးလို့ ထွက်ဆိုပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကတော့ လူသတ် မုဒိမ်းကျင့် သွားတဲ့ တရားခံကို အခုထိ ရှာဖွေလို့ မရသေးဘူးလို့ ထုတ်ပြန် ပါတယ်။ ကောင်မလေးအလောင်းကို စစ်ဆေးပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၄ တနလာင်္နေ့မှာ မြေမြှပ်သဂြိုဟ်ပြီးပါပြီလို့ သတင်းတွေအရ အကြမ်းဖျင်း သိနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ခြင်း မရှိတာကို Khaing Myat Lin ရခိုင် အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးစွဲသူတစ်ဦးကနေ မလေးရှားနိုင်ငံ ကိုတာဘာရူး နယ်မြေတွင် မြန်မာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အား ဘင်္ဂလီ ကုလားတစ်စု မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုပြီး သတင်းအမှားနဲ့ စဖွပါတယ်။ ဒါကို ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေသူတွေအပြင် သတင်းကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ချဲ့ကားလာကာ နောက်ဆုံး မလေးရှားမှာ၊ ထိုင်းမှာ စသည်ဖြင့် ပေါက်ပန်ဈေး သတင်းဖြန့်ဝေလာတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်လာပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး မဟုတ်တဲ့သတင်းကို ဟုတ်သယောင် လုပ်ကြံဖန်တီးကာ ပွဲမဆူဆူအောင် ယုတ်ညံ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ သတင်းမှားတွေကို ဖြန့်ဝေတာဟာ ဒီတစ်ကြိမ်တည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ရခိုင် မသီတာထွေးဟာ မုဒိမ်းကျင့်မခံရဘူးဆိုတာကို ရခိုင်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ထက်ထက်အပါအ၀င် ကျောက်နီမော်တစ်ရွာလုံး၊ ဇာဂနာအပါအ၀င် ရခိုင်ကော်မရှင် တစ်ခုလုံး သိပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး မကုန်ကုန်အောင် ဒီမုဒိမ်းမှုတစ်ခုတည်း အရင်းပြု ထိုးကျွေးခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ မူလတည်းက အဆင်းရဲဆုံး ပြည်နယ်ဖြစ်နေတဲ့ အပြင် ၂၀၁၂ နောက်ပိုင်းမှာ မြေကွက်ရောင်း လို့ရတာက လွဲရင် ဘာစီးပွားမှ မထွန်းကားတဲ့ အဆင့်ကို ထိုးကျသွားပါတော့တယ်။ အမြတ်ဘယ်သူထွက်ခဲ့ပါသလဲ။
ရခိုင်တွေရဲ့ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းတဲ့ ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့ အမည်ကောင်းဟာ လက်တစ်ဆုတ်စာ လူတစ်စုရဲ့ မှိုင်းတိုက်မှုကြောင့် ဆုံးရှူံးသွားခဲ့ရသလို မွတ်ဆလင်တွေက မြေနေရာတွေ၊ စီးပွားတွေ၊ အသက်အိုးအိမ်တွေကို အဓိကရုဏ်းအကြောင်းပြ လုယက်မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခံ လိုက်ရပါတယ်။ နှစ်ဖက် စလုံး အနည်းနဲ့အများ နစ်နာကြတဲ့ အိမ်ကြက် အချင်းချင်း ဘာသာတရား အိုးမဲကြီးကို သုတ်ပြီး ခွပ်ခိုင်းတဲ့ ပွဲမှာ ရခိုင်သံယံဇာတကို အကုန် မ, သွားတဲ့ တရုတ်ကြီးနဲ့ ရောင်းစားတဲ့ စစ်အစိုးရက လွဲရင် ဘယ်သူမှ အမြတ်မထွက်ပါဘူး။
အဓိကရုဏ်းပွဲစား ဦးဝီရသူအပါအ၀င် လာရောက်လှုံဆော်ဟောပြော ဓာတ်ဆီလောင်းကြတဲ့ ဘယ်ဘုန်းကြီးမှ အနေအစားမပျက်ဘဲ ပါရာဒိုကားလေးစီး၊ တရားပွဲထဲဝင်၊ ပြောချင်တာပြော၊ အလှူငွေယူ၊ အဲယားကွန်း ကားလေးပေါ်တက်၊ ကိုယ့်ကျောင်း ကိုယ်ပြန်သွားခဲ့ပေမယ့် ကျန်ခဲ့တဲ့ လူနှစ်စုဟာ မတဲ့အောင် အမုန်းပွားအောင် ဓာတ်ဆီလောင်း မီးရှို့ခံခဲ့ကြရတဲ့ အတွက် နေစရာ စားစရာ မရှိဖြစ်ရတာဟာ အောက်ခြေပြည်သူတွေ ပဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အမုန်းတရားဟောပြောတဲ့ အဓိကရုဏ်း ပွဲစား ဦးဝီရသူ အပါအ၀င် ကျန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ အစားအသောက်မပျက် ပါးဖောင်းလျှက် စည်းစိမ်မပျက် အောင်ပန်းဆင်လျှက်ပါပဲ။
မိတ္ထီလာကုန်ခဲ့တယ်။ ဦးသောဘိတ ဘယ်လို သေဆုံးခဲ့ပါသလဲ။ ဦးဝီရသူ နှပ်ကြောင်းပေး သေစေချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း၊ ဦးရဲမြင့် ထုတ်ပြန်တဲ့အတိုင်း ဦးသောဘိတသေပေးခဲ့ရပါတယ်။ မျက်မြင်သက်သေ အရူးတစ်ယောက်ကလွဲရင် မရှိပါဘူး။ သတ္တိရှိရှိ အများပြည်သူသိအောင် ဖွင့်ချစစ်ဆေးခဲ့တာ မရှိပြန်ပါဘူး။ အမုန်းနွံနစ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် အမှားအမှန်ကို မသိနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ တကယ်တမ်း နစ်နာရသူတွေဟာ မိတ္ထိလာဒေသခံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၀င်ရောက် မီးရှို့သတ်ဖြတ်သူတွေဟာ ဘူဒိုဇာမောင်းတတ်တဲ့ သူစိမ်း သင်္ဃန်းပတ် ဘုန်းကြီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖျက်ဆီးရေးသမား အဓိကရုဏ်းပွဲစားတွေ အောင်သေအောင်သားစားပြီး အောင်ပွဲခံခဲ့ပေမယ့် မီးရှို့ လုယက်သတ်ဖြတ်ခံရသူတွေဟာ မိတ္ထိလာဒေသသားတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံသား အောက်ခြေလူတန်းစားတွေပဲ ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ လာရှိုး၊ ဥက္ကံကစ မိုးညိုထိ လုယက်ဖျက်ဆီးမှုတွေ ဘယ်သူ့ကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသလဲ။
နောက်ဆုံး အလိမ်အညာသတင်းတွေနဲ့ပဲ မန္တလေး ပျက်လုလုဖြစ်ခဲ့ရပြန်တယ်။ နှစ်ယောက်သေတယ်။ သတ်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ထင်ထင်ရှားရှားကြီးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ လုပ်ခဲ့သလဲ၊ ဘာကြောင့် လုပ်နေသလဲ အားလုံး သိကြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အမုန်းတရားဟောပြောတာ အခွေထုတ်တာတွေကို တရားဝင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့၊ ခုချိန်ထိ အမုန်းတရား ဖြန့်ဝေခွင့် တရားဝင်ပေးနေဆဲဖြစ်တဲ့ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ အမျိုးသားရေးအမည်ကောင်း ဟစ်ကြွေးနေသူတွေကြောင့် မြန်မာပြည်ဟာ နိုင်ငံတကာမှာ သိက္ခာအကြိမ်ကြိမ် အဖတ်ဆယ် မရအောင်ကျဆင်းခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘရာဇီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မုဒိန်းမှု သတင်းအား မလေးရှားတွင် မြန်မာ မိန်းကလေး မုဒိန်းကျင့်ခံရပြီး အသတ်ခံရဟု လုပ်ကြံ လှုံ့ဆော်ရေးသားမှုကို ၉၆၉ မီဒီယာနှင့် ဦးနေမျိုးဝေတို့မှ ထပ်ဆင့်ဖြန့်ချိနေ
This entry was posted on December 11, 2014 at 4:41 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
One Response to “ပြသနာပေါင်းစုံ ဖန်တီးကာ အမျိုးသားရေး အဆိပ်ခပ်ခံနေရတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်”
drkokogyi Says:	December 11, 2014 at 12:58 pm | Reply July Moe
မတူကွဲပြားနှင်အရက်သမားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နေမျိုးဝေ နဲ့ အပေါင်းပါ တွေဟာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ပြသာနာဖြစ်ပွားရန်လှုံ့ဆော်ရေး တာဝန်ခံတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဝီရသူ နဲ့ မဘသ တွေလည်း ဒီလို တာဝန်ခံတွေပါပဲ။သိန်းစိန်သူတောင်းစား ရဲ့ လက်ပါးစေတွေပါ။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် NLDရဲ့မဲတွေကို ဖဲ့ယူဖို့ပါတီငယ်တွေကို မဲပိုမိုရရှိစေမဲ့ ဥပဒေ တခုလည်းသိန်းစိန်အစိုးရမှ ကောက်ကျစ်စွာ ပြဌာန်းဖို့ရှိနေပါတယ်။အဓိက ကတော့ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့NLD မဲတွေ လျော့သွားဖို့ ပါ။ ဒီအတောအတွင်း ကြံ့ဖွတ်ပါတီဘက်ကို မဲအနည်းဆုးံ ၂၅% ကျော်ရလာဖို့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ လုပ်တောင်သွားဖို့လည်း ရှိပါတယ်
ဘရာဇီးနိုင်ငံ လူသတ်မှု့ သတင်းစာမှ
မြန်မာအမျိုးသမီးကို ဘင်္ဂါလီတစုက သတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း
သတင်းအမှားများဖြင့် ပဋိပက္ခ များ
ရပ်တည်ပြီး သတင်းမှန်အဖြစ် အများသိအောင် Facebook စာမျက်နှာများတွင် ဖော်ထုတ်ပေးခဲကြသော-
U Naing Win (London) နှင့်အတူ
သတင်းမှန်ကို တင်ပြပေးသူ အားလုံးကို